Umculi ogqithisayo uDima Bilan usemncinci kwaye uyavuya. Ukuthintela umnqweno wokukhathala nokuzidla, unamandla ngokwawo, uvuyo, uvuyo. Omnye wabadlali abadumileyo bathetha malunga nento azimisele ukuyisebenzisa ngayo imali, endaweni yakhe enokuthanda ukuba nayo, nokuba kutheni ufuna ukuthandana.
Ndifuna ukuhlala ngumntu oqhelekileyo!
Ukuba yinkwenkwezi, kwimbono yam, ngumsebenzi omkhulu kuwe, ofuna ukuphumla. Kwaye into ebalulekileyo kunoko ukuhlukanisa phakathi kobuntu kunye noluntu, kungekhona ukulahlekelwa ngumntu. Ndiza kuthetha ngaphandle kokuthozama kakhulu: Ndicinga ukuba ndiphumelele. Ndizama kanzima ukukhokela ubomi obuqhelekileyo, ngokufanayo nabanye abantu: ngokuvuya kwabantu kunye nemisebenzi yasendlini. Kwaye uzimisele ukuhlala efana nendoda eqhelekileyo, njengoko wayesoloko ehlala, engenakho i-stellar quirks!
Ndiza kuzisa lonke ilizwe kunye nam .
Ndenenhlanhla ngokwaneleyo ukuba ndisebenze nomvelisi wasentshonalanga uTimbaland (ngoko, umculi waseMerika u-Justin Timberlake wabambisana). Yona inqubo yokurekhoda nokudala ingoma imangalisile. Yonke into iphela kwizinga elihlukileyo. Imali, ngokuqinisekileyo, isetyenzisiwe kakhulu, kodwa ingafaniswa nexabiso leethuba lokuvula? Izinto ezilungileyo azenziwanga ngexabiso. Kodwa ndide ndiphupha ukukhulula ulwimi lwesiNgesi, kungekhona i-albhamu, i-albhamu, kodwa i-American one. Xa sele sele ibhaliswe, safumana ngokukhawuleza iziphakamiso zokukhutshwa kwiibhile ezihlukeneyo. Kwaye oku, njengoko ndithanda ukukusho, kwandisa amathuba okuba ndiyazi lonke ihlabathi. Kwaye kungekudala kuya kwenzeka! Nantsi, ngolunye usuku mna, ngokomzekelo, ndafumanisa ukuba eJamani, kwesinye sezikhululo zomsakazo ezidumileyo, ingoma yam lwesiNgesi kwiveki yesibini kwimigca yokuqala kwi-parade ye-hit. Emva kwam kuza umculi omangalisayo uRihanna, endimthanda kakhulu. Iiveki ezimbini kwindawo yokuqala - kuthetha into ethile, ucinga ntoni? Ngokombono wam, into enhle kakhulu, enhle kakhulu!
Into ephambili kule ngoma kukunyaniseka.
Ngoko ngubani oya kukuxelela ukuba ndiphulaphule ingoma? Ngubani oya kukholwa? Kwaye oku kunjalo kunjalo: ngamanye amaxesha kakhulu ndifuna ukuliphulaphula, iingoma ezivela entliziyweni. Nantsi into endiyithandayo:
Esi siqhwithi siphepho,
Le dama ilinzulu elwandle!
Ndiyakuthanda iingoma zabantu kunye nokuthandana. Umculo uhlukile! Kwaye ndiyakwazi ukucula ngeentlobo ezahlukeneyo ngokulinganayo kunye nomphefumlo wam! Ndisanda kuhlabelela iingoma ezimbini ezibalulekileyo ze-movie "Gloss". Kwakumnandi! Ndandisoloko ndiphupha ukucula ingoma yomntu kunye nayo yonke ingoma eyaziwayo "Oh, sole mio". Kwaye wayenomdla wolwandle, wenza oko kwilungiselelo elimangalisayo likaAndrei Konchalovsky. Kubonakala kum ukuba yonke into yavela kakuhle, kakuhle. Ngomculo wesibini ozwakalayo kwifilimu, "Bawethu abathandekayo baseMuscovites", ndinemikhumbuzo emnandi. Xa sitshitshisa ikhutshulwa emfanekisweni, ndaphuma kuzo zonke izitrato kunye neendlela zaseMoscow kwaye ndibukele amaMuscovites. Ndingaba nokwenza ubalo lwabantu kwaye ndibale ukuba zininzi iimoto ezazinike zona, kwaye zingaphi - abazange bathethe nantoni na. Ndifuna ukunitshela, ipesenti 80 zandizimela zathi: "Hayi, Dima! Sawubona! "
Kwangexesha elide ndiphupha, ukuba kum isibonelelo sokubambisana kwiqela "VIA Gra" lenze. Ndiyakuthanda ubuchule bala ma ntombazana. Ndingathanda ukwakha into ndawonye! Iqhotyoshelweyo "Iintyatyambo kunye negazi" yenze into engayilibalekanga kum. Awu, ndingathanda ukuba kwindawo yomntu bonke abachaphazelayo! Ndingathini? Ndiyathanda ngoJeanne Friske. Mhle, ujabule, uphawule kwaye usebenza ngokusemthethweni! Yaye isondo sakhe sinomdla, kodwa kungeyonto engcolileyo! Emva kwakho konke, umda phakathi kokungcola kunye nokuziphatha ngokwesondo kukhulu, kungekhona wonke umntu onokukwenza. Kwaye kuvela! Yinto ebonakalayo kuyo nayiphi na imbonakalo, kwaye umntu, kungakhathaliseki ukuba kunzima kangakanani, akakwazi ukubonisa "ubulili", okufuneka ukuba kube nomculi.
Kukho abantu abenza umfanekiso ohlazolayo. Benza izinto ezinobuncwane ukuze bathethe ngazo ngokubanzi kwaye bathethe ixesha elide. Umzekelo, umzekelo kaJanet Jackson kunye nesifuba sakhe okanye uBritney Spears, ovela kwiindawo ezingenasiphelo! Aba bantu banoyikisayo abememeza esithi: "Hayi, khangela kum, ndiyadumala!" Ebomini bam bekungekho kwaye ayiyi kubakho ukukhwabanisa okunjalo. Ngokuqinisekileyo, kwakukho ixesha xa kwakudingeka ukutshitshisa kwenye indawo, kwakukho iifotshane zezithombe, ezikhunjulwa ezininzi. Kwakukho ukungaxhatshazi, oko kwenzeka ngenxa yezizathu ezingaphaya kwam ukulawula. Kwaye ke wonke umntu wathi: "Ndandifuna ukuzithuthukisa kumculi othandwayo uDima Bilan!" Kodwa andiyi kusebenza ngomfanekiso othukayo. Ndiza kuthatha abanye.
Ndinezinto ezininzi zendlu! Yiza ekhaya, vula umnyango, uze uvale. Ukuthatha isitya ngokuqhelekileyo ngumsebenzi obaluleke kakhulu. Kwaye ngokukhethekileyo amaxesha amabini - kwindlu yokungena nakwi-exit. Yintoni enye? Beka izitya kwi-dishwasher ukuba ziqokelele. Kwaye kwenzeka njalo. Ewe, konke oko! Kwaye ukuba ngaphandle kwamahlaya, andisayi kulibala indlela yokukhipha udoti kunye nokucoca. Kwimeko apho ndinako.
Igama lakhe nguLena Kuletskaya. Umzekelo, uhlala eParis. Ulungile: ukhaliphile, unomusa kunye ne talente. Sonke sineshedyuli esomeleleyo kwaye ixakekile, ngoko asibonanga rhoqo njengoko sifuna, kodwa yonke intlanganiso entsha injengeholide! Ngokuqhelekileyo, kumantombazana ndiyakuthandwa kakhulu ngokungenakwenzeka. Ndithanda kakhulu abantu abangahambi ngokukhawuleza ukudibanisa, ukuthetha kunye nani kufuneka nibeke umgudu omkhulu. Le nkqubo inomdla kwaye inomdla. Akunanto yinto abayithethayo, "Isiqhamo esinqatshelwe sihle." Kanti intombazana kufuneka ibe nemihlali kwaye ilula. Ndithande. Kungekudala, ndiqala ukuxabisa uthando ngakumbi nangakumbi. Kwakunzima kakhulu ukuba unyanisekile kwaye uthembeke-ufunyenwe. Njengomntu oqhelekileyo, ndiphupha malunga nosapho, ikhaya, umfazi nabantwana, ubuncinane ezimbini. Nangona okwangoku ndingakulungele ubomi bentsapho elinezolileyo, kuninzi kakhulu i-eccentrics kunye nelitye kunye ne-roll in the shower. Eyokuqala ngoku ngokuzimelela kunye nokusebenza. Konke ngexesha elifanelekileyo.
Indodana endala kaAndrei Konchalovsky yayithetha ngempilo kaMdadewabo kaMas
U-Xenia Borodina uthengisa iingubo kunye no-Ali-Express nge-400%-mark-up, uphando lwezithombe
Udade uJeanne Friske washicilela isithombe esenziwe ngosuku lokufa komculi
U-Elizaveta Boyarskaya njengoAna Karenina: uhlolo lokuqala, ukugxeka, ukuphonononga, ifoto
I-venison edibeneyo kunye ne-pomegranate sauce kunye neerjunki
Kuthekani ukuba umntu wakho unomdla?
Amabele amabisi kunye noshizi, utamatato kunye nokuzaliswa kweziseko
UBilan akazange ahlabelele noNelly Furtado
Capelin e nandi
Iindlela zokupheka eziphambili - ukutya okunciphisa umzimba
Ngokuphila ngomculo, okanye indlela umculo uthinta ngayo umntu
IiVitamin zokupheka kubantwana
Yintoni i-anemia kwabasetyhini abakhulelweyo?